Ukuhamba kwe-Aerobic Speed ​​- Ndimele ndihambe ngokukhawuleza?
Ndifanele ndihambe ngokukhawuleza?
Xa uphakamisa izisindo, unengcamango enhle ukuba umsebenzi wenziwe njani. Ukuhla, phantsi, inani elithile lokuphinda ngokumalunga nesisindo esithile, mhlawumbi uphindwe kwiiseti eziliqela. Inokuba isekelwe kwipesenti yeyona nto ungayiphakamisa okanye kwimbali yento oyenyusa ngaphambili. Kwidama lokubhukuda, ngababhukumi bayazi njani ukukhawuleza ukugibela ukufumana ukuqeqeshwa okufunayo? Oku kuxhomekeke kwiyiphi imiphumo ofuna ukuyigxininisa - i-anaerobic okanye i-aerobic metabolism.
Ukubhukuda kunento ethile nganye, kunye negalelo lomsebenzi we-aerobic ukwandisa njengoko umgama ukhula. Abashukumi kufuneka bahlakulele zombini le mimandla - umsebenzi ococekileyo we-anaerobic ulunge kakhulu kwixesha elikhawulezayo elinokwenzeka, ngoko ke ukugqiba isantya akubalulekanga kubaninzi abagijimayo-uhamba ngokukhawuleza njengoko unako! Umgama we-swum kunye nesixa sokuphumla phakathi kokubhukuda kunceda ukugqiba ngokukhawuleza ukuba unokubhukuda rhoqo ukuphinda; umsebenzi ngokwawo uqikelela ukukhawuleza kunye nokufundiswa. Kukho nezinye iimeko ezininzi, kubandakanywa nenani lezithwaba ezithathwe ubude okanye ngesibini (umgama nge-stroke okanye izinga le-stroke rate) - ubunjani bohlobo ngalunye lomsebenzi ukugqiba kwiseshoni, iveki okanye umjikelo woqeqesho - nendlela lungisa amalungiselelo okusebenza ukuze ufumane uninzi kwizinto ozenzayo.
Ukujolisa i-aerobic metabolism ayikho lula kakhulu. USA Ukubhukuda kusetyenziswa uluhlu olwamkelekileyo ngokubanzi lwamanqanaba amathathu ahlukeneyo yomsebenzi we-aerobic.
Eninzi imidlalo isebenzisa inkqubo efanayo ukuchaza amanqanaba omsebenzi. Apha, siya kusebenzisa ezi nkcazelo:
Inqanaba elincinci lokunyamezela (EN1) - phantse nawuphi na umgama, kunye nokuphumla okuphantsi (ngaphantsi kwe: 30 seconds) phakathi kokuphinda, i-swum kwinqanaba elizinzileyo, elincinane. Olu hlobo lomsebenzi olusetyenzisiweyo luthatha imizuzu eyi-15 ukuya kweyama-60 (okanye ngaphezulu). Kunceda ukwakha ididi yesiseko kunye nokukhuthaza ukubuyiswa. Umzekelo: ii-6 x 500 kwii- EN1 ijubane nge: imizuzwana engu-15 ihlala phakathi kokuphinda okanye 6 x 500 @: ukuphumla oku-15, i-EN1 ijubane.
I-Preshold Endurance Pace (EN2) - ngokuqhelekileyo ibanga elingaphantsi kweeyadi ezili-500 ukuya phezulu: imizuzwana engama-60 ihlala phakathi kokuphindaphinda, i-swum kwizinga ngokukhawuleza kune-EN1 (siza kujonga ukuba kukhulu kangakanani emva kancinane). Olu hlobo lwesethi lithatha phakathi kwe-20 no-45 (okanye ngaphezulu) imizuzu ukugqiba kwaye kufuneka ukwandise ikhono lakho lokwenza umsebenzi we-aerobic ngaphandle kokubangela ukwakhiwa kweemveliso zentengiso kwiimisipha, kodwa kufuneka zilandelwe ngumhla wokusebenza lula ukubuyisela isitolo se-glycogen. Umzekelo: 8 x 175 @: ukuphumla kwe-20, i-EN2 ijubane.
I-VO2Max Endurance Pace (EN3) - ngokuqhelekileyo ibanga elingaphantsi kwamadidi angama-300 ngokuphumla phakathi kwendawo: imizuzwana engama-20 ukuya kwixesha elingana nomlinganiselo womsebenzi ogqityiweyo (1: 1 umsebenzi wokuphumla ukulinganisela) ngesantya ngokukhawuleza kunokuba zombini i-EN1 ne-EN2 (kuba nomonde - siya kufika kuwo). Ngokuqinisekileyo awuyi kukwazi ukubamba le nqanaba ixesha elide kunemizuzu engama-30. Olu hlobo lomsebenzi lunokuthi lufanise ukuchaphazeleka okufanayo kwintambo. Umsebenzi onzima kakhulu kwaye kufuneka ulandelwe ngenye indlela yokuphucula ukubuyisela ukubuyisela izitolo ze-muscle glycogen. Umzekelo: 8 x 100 @: 45 ukuphumla, i-EN3 ijubane.
Kubalulekile ukulinganisa iinzame zakho zokuncedisa ukuthintela uqeqesho oluphezulu. Yenza uninzi lomsebenzi wakho kule migudu yokunyamezela, wenza ezinye zeeyonto nganye ngeveki.
Umthetho onzima kakhulu wezandla zonyaka wokuqala umsebenzi wonyaka we-50% EN1, 30% EN2, 10% EN3, kunye ne-10% esele ikwabelwana phakathi kwamagqabi okulula alula kakhulu (elula kune-EN1) kunye ne-anaerobic ngokukhawuleza kunye namandla okukhawuleza. Nangona bonke abagijimi banokufumana inzuzo kwisinye isantya esiphezulu somsebenzi, abaninzi abayidingi kakhulu. Unokuphuhlisa isantya ngokusebenza kumanqanaba okunyamezela.
Khumbulani, musa ukunikela ubungqina bezakhono ngokukhawuleza. Udinga ukubetha ibhalansi; abagijimi abahamba ngokukhawuleza ngokuqhelekileyo abo babambelela ngeendlela ezifanelekileyo ngokukhawuleza kwixesha elide kakhulu. Ukuba uqala nje kuya kuba ngcono kuwe ukuba ubambe isitayela esihle ngokukhawuleza.
Ok, ke ... yintoni umlinganiselo wam we-EN1, EN2, okanye umsebenzi we-EN3? Udinga ukumisela uhlobo oluthile lokulinganisa isiseko okanye iqalo lokuqala.
Ukuhlaziywa nguDkt John Mullen ngo-Apreli 26, 2016
Kwidama lokubhukuda, ngababhukumi bayazi njani ukukhawuleza ukugibela ukufumana ukuqeqeshwa okufunayo? Oku kuxhomekeke kwiyiphi imiphumo ofuna ukuyigxininisa - i-anaerobic okanye i-aerobic metabolism. Ukubhukuda kunento ethile nganye, kunye negalelo lomsebenzi we-aerobic ukwandisa njengoko umgama ukhula. Uhlobo olunjani lovavanyo lokushukuma onokuyenza ukuze ufumane amanqanaba akho okubhukuda aerobic?
Okokuqala, siza kumisela isigxina sakho (EN2) ijubane.
Zininzi iindlela ezahlukeneyo ezikhoyo ukufumana eli qalo lokuqala. Phakathi kwazo:
Ukulungiswa kwinqanaba elisekelwe kwiziphumo ze-ten x ye-100 yard (okanye imitha) ibhukuda ngokuphumla okuphantsi kakhulu, okubizwa ngokuba yi-test test.
Inqanaba eliqikelelweyo lokuzikhandla (unokuthi uqhelane neBorg Scale).
Izinga lomlinganiselo wenhliziyo .
Ukulinganisa ngokuthe ngqo kwamanqanaba e- lactate yegazi .
Uvavanyo lwe- T-30 (okanye i-twin yalo ejikelezayo, ukuhamba ngexesha elide elithatha malunga nemizuzu engama-30 ukugqiba).
Uvavanyo lwe -T-30 olulungisiweyo . Ezinye izilingo zexesha, ezifana neemitha ezili-1 okanye iiyadi kwixesha elikhawulezayo elinokukhawuleza, ngokohlula ngo-10 ukufumana uqikelelo lwe-EN2 nge-100 nganye.
Ngamnye unamaphupha awo amahle kwaye amabi, amaqhawe kunye nabathathi. Amanyathelo omsebenzi anxulumene nawe kunye nenqanaba langoku lemiqathango; baya kutshintsha njengoko ufumana isimo esingcono, ngoko kufuneka uphinde ulinganise ijubane lakho ngokuqhelekileyo, mhlawumbi rhoqo rhoqo emva kweeveki ezimbini ukuya kwiiveki ezintathu.
Siza kusebenzisa uvavanyo lwe-T-30 olulungisiweyo, ngokukodwa ukuxhatshazwa kwalo.
Ingenziwa ezininzi iindlela ezahlukeneyo, ingasetyenziselwa imivimbo ehlukeneyo, kwaye iyakwazi ukuyifaka kumsebenzi oqhelekileyo ngokulula. Uvavanyo lwe-T-30 olulungisiweyo:
Kuthatha malunga nemizuzu engama-30 ukugqiba.
Kuquka ukuphinda phantse nawuphi na umgama (Ndiyincoma ama-200 ukuya kuma-400).
Kuquka ukuphumla okufutshane phakathi kokuphinda (: 10 kuya: imizuzwana engama-20).
Eyenziwa ngokukhawuleza okukhawulezayo isantya okanye isantya (kunokuthabatha imizamo emibini okanye emithathu ukulinganisa oku kuhamba ngokukhawuleza kunokukhawuleza).
Ukuba uyazi ukuba unokwenza ukuphindaphinda kweeyadi ezingama-300 kwaye ubambe isantya se-4:30 nganye, unokwenza uvavanyo olutshintshiwe lwe-T-30 olufana nale: 8 x 300 @: ukuphumla kwe-10, nge-4: 30/300 okanye ngokukhawuleza (kodwa ukuba ubamba intambo ngokukhawuleza, kufuneka ubambe isantya esifanayo kuzo zonke i-8!). Enye indlela yokuchaza eli sethethi yayiza kuba yi-8 x 300 ngo-4:40, ibambe ijubane elinokukhawuleza lokuseta (uza kuqalisa ukuphindaphinda rhoqo 4:40; ukuphumla kwakho bekuya kuba umehluko phakathi kwexesha le-swum kunye nokuqala kuphinda kwakhona).
Unokwenza ixesha elide okanye ukuphinda elifutshane, okanye nokuba udide umzuzu o-30 (u-T-30 wangempela). Imilinganiselo ebalulekileyo ubude malunga nemizuzu engama-30 kunye nokukhawuleza kokukhawuleza kwangoko. Ukuhamba kwakho okwenziweyo, okanye ijubane, lilingana nomlinganiselo wakho (EN2) ijubane. Leli nqanaba lakho lokujolisa ukubamba iifom ze type EN2.
Ukuba ubambe i-4: 15s kwisethi esingentla se-300s, ke i-EN2 ijubane yakho ye-100 i ...
1:25 nge 100
Shintsha yonke into ibe yimizuzwana, yenza izibalo, uguquke emva kwemizuzu kunye nemizuzwana:
Imizuzu engama-4: imizuzwana engu-15 = 255 imizuzwana nge-300
255 ihlulwe ngo-3 (enye ikhulu) = 85 imizuzwana nge-100
Imizuzwana engama-85 nge-100 = 1 iminithi: imizuzwana engama-25 nge-100
Qaphela: Kufuneka wenze utshintsho oluncinane kumgama weeyadi ezili-100 okanye ngaphantsi, ukukhupha malunga neekhilomitha ezingama-02 nge-100 - oku kwenza uhambo lwakho olulungelelanisiweyo nge-100 1:23 kumgama ongama-100 okanye ngaphantsi, kunye no-1:25 kumgama ode 100s.
Ixesha le-VO2Max (EN3) lidla ngokuba ngu: 01 ukuya ku: 03 imizuzwana ngokukhawuleza kunomlinganiselo wakho (EN2) ijubane.
Ngokusekelwe kuvavanyo olungentla ngasentla, iinqanaba zi:
I-EN2 ijubane kwi-100s kunye nokuphindaphinda okufutshane = 1: 23/100 okanye: 20.7 imizuzwana / 25
I-EN2 ijubane lemida ephezulu kune-100s = 1: 25/100 okanye: ii-21.2 imizuzwana / 25
I-EN3 i-100s kunye nokuphindaphinda okufutshane = 1:20 okanye: imizuzwana engama-20/25
I-EN3 ijubane kwimimandla engaphezu kwama-100s = 1: 22/100 okanye: ii-20.5 imizuzwana / 25.
Ukujonga le ntengo nge-100 kwimida eyahlukileyo iphumo:
Umda wokuphindaphinda = 25 , EN2 Ixesha lexesha = 0:20 , EN3 Ixesha lexesha = 0:20
Umda wokuphindaphinda = 50 , EN2 Ixesha lexesha = 0:41 , EN3 Ixesha lexesha = 0:40
Umda wokuphindaphinda = 75 , EN2 Ixesha lexesha = 1:02 , EN3 Ixesha lexesha = 1:00
Umda wokuphindaphinda = 100 , EN2 Ixesha lexesha = 1:23 , EN3 Ixesha lexesha = 1:20
Umda wokuphindaphinda = 125 , EN2 Ixesha lexesha = 1:46 , EN3 Ixesha lexesha = 1:42
Umda wokuphindaphinda = 150 , EN2 Ixesha lexesha = 2:07 , EN3 Injongo yexesha = 2:03
Umda wokuphindaphinda = 175 , EN2 Ixesha lexesha = 2:28 , EN3 Injongo yexesha = 2:23
Umda wokuphindaphinda = 200 , EN2 Ixesha lexesha = 2:49 , EN3 Injongo yexesha = 2:44
Umda wokuphindaphinda = 300 , EN2 Injongo yexesha = 4:14 , EN3 Injongo yexesha = 4:06
Umda wokuphindaphinda = 400 , EN2 Ixesha lexesha = 5:39 , EN3 Injongo yexesha = 5:28
Umda wokuphindaphinda = 500 , EN2 Injongo yexesha = 7:05 , EN3 Injongo yexesha = 6:50
Ngoko ngoku ... ndiyisebenzisa njani le migudu yokubhukuda i-aerobic ngokubhukuda?
Kwidama lokubhukuda, ngababhukumi bayazi njani ukukhawuleza ukugibela ukufumana ukuqeqeshwa okufunayo? Oku kuxhomekeke kwiyiphi imiphumo ofuna ukuyigxininisa - i-anaerobic okanye i-aerobic metabolism. Ukubhukuda kunento ethile nganye, kunye negalelo lomsebenzi we-aerobic ukwandisa njengoko umgama ukhula. Ungayisebenzisa njani i-aerobic okanye i-pachold training stes?
Ukuba ufuna ukwenza isethi ukuphucula amazinga asebenzayo aerobic ngaphandle kokwakha inkunkuma encinci (ngokuqhelekileyo kucatshangwa njenge-EN2 setset), unokwenza u-18 x 100 @ 1:45, ubambe 1:23 nge-100.
Oku kuthatha malunga nemizuzu engama-30 kwaye kuvumela: imizuzwana engama-20 iphumla phakathi kokuphinda - umsebenzi wakho ukubamba isantya sayo yonke isethi. Phantsi kwamaxesha amaninzi uya kuba nako ukwenza oku ngenxa yokuba uyazi ukuba ixabiso elifanelekileyo. Omnye umzekelo umiselwe ube ngu-6 x 400 @ 6:00, ubambe u-5:39 nge-400.
Yiyiphi imida yephutha lokubamba ijubane? Njengoko kuboniswe kwitheyibhile elingentla, u-3% umahluko ohambisayo uya kukunyusa ukuya kwinqanaba elilandelayo lomsebenzi. Kufuneka ube nechanekileyo kunokwenzeka xa ugcina ijubane lakho lokukora kwisethi esinikeziwe. Oku kuya kuthatha amava - ngoko ungadikibala ukuba okokuqala "uphelele kwimephu" xa kuza ukuphinda amaxesha. Uya kufunda ukuba isantya ngasinye sivakalelwa njani; indlela yokubalisa ukucinga kwakho okubonakalayo kwijubane langempela. Njengoko uphucula izinga lakho lokuzimelela, kwaye ukugcina ijubane lesigqibo kuba lula, lixesha lokuphinda uvavanyo olusetyenziswe ukuseka kwakhona loo nqanaba lomgomo.
Ezinye iintsuku awuyi kuba nako ukubamba ijubane "elimiselweyo".
Ngoba kutheni? Usenokuba uphelile kakhulu emva kobusuku obungaphambili, ukweqa isidlo sasemini, ukhohliwe ukusela amanzi okwaneleyo, okanye ukhathele ukuba uhambe ngezolo. Kule meko, kufuneka ulungele umzimba wakho kunye nengqondo yakho - ukuba awukwazi ukwenza lo msebenzi, utshintshe! Yenza ukubhukuda okulula, ugxile kwicebo lakho. Buyela ngokuzayo ngexesha elitsha kwaye ulungele ukwenza lo msebenzi.
Ukuphumla kuyingxenye yesicwangciso somsebenzi jikelele. Ngaphandle kwayo, awukwazi ukwenza umsebenzi ngokukhawuleza ukufumana iziphumo ozifaneleyo.
Zama le ndlela ukuze uhlele isantya sakho sokufunda kwiiseti ezahlukeneyo. Ukuba ugcina umkhondo wendlela oyenzayo, unokwenza utshintsho oluzenzekelayo kunye nokuhlaziywa kwinqanaba lakho njengoko uphucula. Phantse nayiphi na isistim e-EN2 esithatha malunga nemizuzu engama-30 apho ubambelela ngokukhawuleza kunokwenzeka ukuba isetyenziswe ukuhlaziywa ngeenyawo zakho.
Indlela Yokuba I-Olympic Swimmer
Yeka Ukubhukuda Iiphene Zengxakeko Zengxaki
UkuHlaba iMigangatho yexesha
Izizathu ezi-10 zokusebenzisa iChibi elingapheliyo
Ukwahlukana phakathi kwe-Olympic Swimming and College College
Imigaqo yokuHlanganisa kunye nokugweba
Ngaba Kukho Umda Wokudlala I-Stroke okanye I-Round Golf?
Umntu Ohlaza, uMoya wehlathi
I-Novena kuSt Frances Xavier Cabrini
Imfazwe yase-Byzantine-Ottoman: Ukuwa kweConstantinople
I-Biography kunye neProfayili ka-Anthony Pettis
Iingcaphulo zabasetyhini kwiMbali yeMnyama
Vieillir - ukuguga